लकडाउनको बेला अरु पसल बन्द गरेर खोलेको भाटभटेनीले मदिरा बेचेपछि…. - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
लकडाउनको बेला अरु पसल बन्द गरेर खोलेको भाटभटेनीले मदिरा बेचेपछि….
काठमाडौं- देशकै प्रमुख सुपरमार्केट भाटभटेनी सुपरस्टोरले अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी)भन्दा बढी मूल्य लिने गरेको बारम्बार गुनासो आउने गरेको छ ।
अहिले लकडाउनमा मदिराको व्यापार गर्ने गरेको पाइएको छ । भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्स टंगालले मदिरा बेचेको थाहा पाएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्पष्टीकरण मागेको छ ।
लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यक वस्तुको मात्रै बिक्री वितरणका लागि सरकारले अनुमति दिएपनि भाटभटेनीले मदिरा बिक्री वितरण गरेको भन्ने उजुरी विभागमा परेपछि स्पष्टीकरण सोधेको बजार अनुगमन शाखा प्रमुख सागर मिश्रले बताए।
‘लकडाउनका बेला अत्यावश्यक वस्तुमात्रै बिक्री वितरणका लागि पसल खोल्ने सरकारको निर्णयअनुसार भाटभटेनीले पनि दाल, चामल, नुन, चिनीलगायत खाद्यान्न र अत्यावश्यक वस्तुमात्रै बेच्नेगरी खुला गरिएको थियो। तर भाटभटेनीले मदिरा पनि बेचेको भन्ने विभागलाई गुनासो आयो।’ मिश्रले भने।
यो सुपरस्टोरले विदेशबाट आयातीत सामानमा आफ्नै नयाँ मूल्य सूची बनाइ स्टिकर टाँसेर बढी मूल्य लिने गरेको गुनासो बढेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको फेला परेको थियो ।
देशभरि लकडाउन हुँदा अन्य बजारहरू सीमित समय खुला गर्न दिइए पनि भाटभटेनीलाइ भने दिनभर खोल्न दिइएको छ ।
संकटकालीन अवस्थामा माैकाका फाइदा उठाउँदै आएको गुनासाेपछि विभागले अनुगमन गर्दा बढी मूल्य लिएको फेला परेको थियो ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: सोमबार, असार १ २०७७ १३:४७:०२